The Windows taskbar inzvimbo inobatsira yekuchengetedza anowanzo shandiswa maapplication pamwe nemaapps iwe auri kuvhura parizvino. Asi iwe unogona kuibvarura kuti iite kuti ishande nenzira yaunoda. Fambisa bharaki rebasa kune mamwe mativi eiyo skrini, otomatiki uvanze pausingade, kana shandura saizi yemifananidzo. Uye iwe unogona kusarudza kuti ndeapi ma icon anoonekwa pabhara rebasa nekutadza. Ngatitarisei kuti sei.
Nekusagadzika, iyo yebasa inooneka pasi pechiso. Asi iwe unogona kuendesa kune iyo kumusoro kana kune rumwe rutivi rwechidzitiro. Kuti uite izvi pamawoko, tinya pane chero nzvimbo isina chinhu yeadhibhodhi uye uidhonze kunzvimbo yako yaunoda.
Kana iwe uchida kurega Windows ita kufamba kwako, tinya-kurudyi pane chero chinhu chisina chinhu chebarbar yebasa uye tinya pamisangano yeTaskbar kubva kumenyu yepop-up. Bhura pasi pasi peTaskbar yekumisikidza skrini kune yekupinda ye "Taskbar nzvimbo pane skrini." Dzvanya pasi-pasi bhokisi uye isa nzvimbo kuruboshwe, kumusoro, kurudyi, kana pasi.
Usasiye Taskbar yekumisikidza skrini ikozvino; kune mamwe akati wandei ma tweaks atinogona kugadzira pano.
Ngatitii iwe unoda kuti taskbar irambe yakavanzwa kunze kwekunge waendesa mbeva yako kunzvimbo yayo. Kana iwe uri kushandisa yako Windows PC kana chimwe chishandiso mu desktop modhi, vhura sarudzo iri pamusoro pechidzitiro inoti: "Viga bhaa rebasa mumodi yedesktop."
Kana urikushandisa piritsi kana chimwe chishandiso mumodi yetablet, vhura sarudzo inoti: "Viga bhaa rebasa mumamiriro epiritsi." Bhari yako yebasa ichanyangarika uye inongowanikwa chete kana iwe uchifambisa mbeva yako mbeva kunzvimbo yebhawa.
Gadzirisa Icon size
Iye zvino ngatiti iwe unoda kukwanisa kusvina mamwe maidhoni pabhara rebasa. Batidza iyo sarudzo ye "Ratidza bhatani diki rebhatani," uye zviripo zviratidzo zvinoderera muhukuru. Zvidiki? Bvisa iyo imwecheteyo sarudzo kuti uvadzorere kune yavo yakakura saizi.
Iwe unoda here kukwanisa kusevha peek pane desktop yako pasina kuvhara kana kurerutsa rako rose rakavhurika windows? Batidza sarudzo ye "Shandisa Peek kuti utarisezve desktop paunofambisa mbeva yako kuRatidza bhatani rekomputa panoperera bharaki rebasa." Zvino fambisa mbeva yako kukona rezasi rekona yechidzitiro, uye desktop yako inofanira kuoneka. Fambisa mbeva yako mbeva kure nenzvimbo iyoyo, uye desktop yako inodzokera mukuhwanda.
Zvakanaka, ikozvino ngatiti iwe une mifananidzo yakawanda kwazvo yakavakirwa pabhara rebasa zvekuti hapana nzvimbo yavo pamutsara mumwe chete.
Iwe unokwanisa kudzoreredza kabhodhi rebasa kuti ikure kure. Ingo tora iwo muganho wepamusoro webhaa yebasa uye wadhonza kumusoro kusvikira iyo inotora mitsara miviri.
Kana iwe ukafunga kubvisa akawanda emifananidzo, unogona kudzikisa kukwirira kwebara rebasa kudzoka kumutsara mumwe nekukwevera pasi muganho wepamusoro. Zvichienderana nemabatiro aunoita saizi yekushandisa, unogona zvakare kutora matanho kuitira kuti usazozviisa netsaona. Pakatarisana neTaskbar skrini, batidza sarudzo kuti "Lock the taskbar." Iye zvino hauchakwanise kuiseta kunze kwekunge waidzima sarudzo yekukiya.
Heino imwe nzira yekumisikidza kuti mifananidzo inokwana sei pabharaki rebasa. Bhura pasi pasi peTaskbar marongero skrini kusvikira iwe waona chikamu che "Sanganisa mabhatani ebhatani." Dzvanya pabhokisi rezasi pasi, uye iwe uchaona zvitatu zvaunogona kuita: "Gara uchivanza mavara," "Kana taskbar razara," uye "Hazvina kumbobvira zvaitika."
"Nguva dzose, viga zvinyorwa" zvinoreva Windows ichagara ichibatanidza akawanda akavhurwa mafaera kubva kune imwechete application, semabrowser tabo, mune rimwe taskbar bhatani. Hover pamusoro pebhatani rechikumbiro chakadai kuti uone kuratidzwa kwemafaira akavhurwa.
"Kana taskbar rizere" kazhinji inoratidza bhatani rakasiyana refaira rega rega rawavhura. Asi kana bharaki rebasa rikazara, iwo mabhatani matatu akapatsanurwa anonamirwa kuita rimwe. Uye "Hazvina kumbobvira" zvinoreva kuti mabhatani ebhatani haatombobatanidzwa, kunyangwe izere iro taskbar rinowana.
Gadzirisa iyo Tray System
Pakupedzisira, iwe unogona kusarudza kuti zvii mifananidzo inoonekwa muSystem Tray pakona yekurudyi yemadziro (wachi, Wi-Fi, vhoriyamu, nezvimwewo).
Chokutanga, pfuurira pasi pasi pesarudzo dzeTaskbar skrini kune chikamu che "Notification Area." Dzvanya pane iyi link yekuti "Sarudza kuti ndeapi ma icon anoonekwa pabhara rebasa."
Pa "Sarudza kuti ndeapi ma icon anowanikwa pane taskbar" skrini, batidza mifananidzo iyo iwe yaunoda kuona muSystem Tray uye kudzima iwo aunoda kuti agare akavanda.
Kana iwe uchida kuva nezvose zviri pedyo newe, vhura zvese:
Ukangozvidzikisira pasi, unogona kuvhura kana kudzima zvidhori zviri nyore paTaskbar masetingi pasi pe "Batidza kana kudzima ma icon esisitimu."
Pane iyo "Batidza kana kudzima maikoni ehurongwa", batidza maekoni esisitimu aunoshuvira kuona muSystem Tray uye dzima iwo ausingade kuti uone.